England Oo Lagu Dhegay, Spain, Germany, Holland Iyo Italy Oo Badiyay Isreebreebka Koobka Adduunka. - jornalizem
England Oo Lagu Dhegay, Spain, Germany, Holland Iyo Italy Oo Badiyay Isreebreebka Koobka Adduunka.
Xulka England ayaa kulankoodii labaad ee isreebreebka koobka adduunka 2014 ee Group H waxa ay barbaro ka tuugeen xulka Ukraine oo marti ugu ahaa Wembley.
Ciyaaryahan Konoplyanka ayaa gool kaga naxsaday xulka Three Liones isagoo hogaanka u dhiibay Ukraine daqiiqadii 38aad ee ciyaarta.
Waxaana England ay dadaal dheer ay u gashay inay goolkaas iska barbareeyaan, Frank Lampard ayaana goolka barbaraha u dhaliyay ciyaarta oo seddex daqiiqo dhiman.
Daqiiqadii 88ad England waa jaalihiisii labaad ka qaatay kabtankooda Steven Gerrard.
Isla Group H Poland waxa ay 2-0 ku dubatay hulka Maldova, halka Montenegro ay 6-0 ku xasuuqday xulka San Marino.
Dhinaca kale Roberto Soldado ayaa gool soo daahay oo u dhaliyay Spain waxa ay ka caawisay in difaacashada koobka adduunka ay ku bilowdaan guul 1-0 oo ay ka gaareen xul daafac ku soo shirtagay Georgia oo ay iskula jiraan Group I isreebreebka koobka adduunka qaarada Yurub.
Isagoo gacanta loo geliyay ku bilaabasho naadir ah islamarkaana uu booska ka galay Fernando Torres iyo David Villa, Soldado ayaa hal fursad oo qatar qasaariyay qeybtii hore, lakiin qeybtii labaad qaladma uusan sameynin markii kubad uu soo dhigay Fabregas oo bedel uu ku soo galay uu shabaqa ku hubsaday daqiiqadii 86aad.
Ciyaartii kale ee Group I ee xalay dhacday Franck Ribery ayaa gool dhaliyay mid kalena ka soo shaqeeyay iyadoo France ay ku gaarcday Belarus 3-1 ciyaar ka dhacday Stade de France, waxaana isreebreebka koobka adduunka ay ku bilowdeen si wacan.
Italy ayaa iyadana 2-0 ku xaqqday xulka Malta ciyaar ka tirsan Group isreebreebka koobka adduunka, waxaana guushooda uga mahadcelinayaan gool ka yimid xiddiga Roma Mattia Destro iyo gool madax ah oo soo daahay oo uu u dhaliyay Federico Peluso, intaas ayaana ugu filneyd inay helaan seddexdii dhibcood ee ugu horeysay ee isreebreebka koobka adduunka qaarada yurub.
Group C Jarmalka ayaa ka badbaaday qaab ciyaareed xun oo qeybtii hore ah oo ay la ciyaareen deriskooda Austria ka hor inta uusan Marco Reus iyo Mesut Ozil aysan goolal u kala dhalin labadii qeyb ee ciyaarta islamarkaana aysan ku badin 2-1.
Group D Holland waxa ay 4-1 ku garaacday xulka Hungary oo marti loo ahaa, labo gool oo ka mid ah waxaa dhaliyay Lens, halka Huntelaar uu isna shabaqa soo taabtay, Indi ayaa isna sidoo kale goolasha ku darsaday.
Isla Group-kaan D Turki ayaa 3-0 ku suuldaaray xulka Estonia.
Group F xulka Portugal ayaa 3-0 ku garaacday xulka Azerbajan, waxaana ay goolasha uga mahadcelinayaan, Varela, Postiga iyo Bruno Alves.